SHIRKII JARAA’ID EE WENGER: Kullanka Palace, dhaawacyada kooxda, xaaladda Wilshare, Mustaqbalka Ozil, rajada Top 4 iyo wax walb oo uu ka hadlay macallinka Arsenal. | Haqabtire News
SHIRKII JARAA’ID EE WENGER: Kullanka Palace, dhaawacyada kooxda, xaaladda Wilshare, Mustaqbalka Ozil, rajada Top 4 iyo wax walb oo uu ka hadlay macallinka Arsenal.
Kullanti wacan oo wanaagsan akhristeyaal kuna soo dhowaada shirkii jaraaid ee Arsene Wenger kahor kullanka Axadda ee Crystal Palace.
RAJADA ARSENAL EE TOP 4
“Waxaa hadda waajib nagu ah inaan is-xoojino.Kooxo badan ayaana culeys badan na saaraya,-haddii aanan badinin kullamada soo socda oo ay guullo gaarto Leicester,markaas waan macsalaameyney Premier league-ga.Waaase inaan sii dagaalanaa ilaa dhamaadka horyaalka”.
QAAB CAYAAREEDKA MESUT OZIL
Kubbad-sameeyahan ayaa lagu soo daray laacibiinta u sharraxan xiddiga sanadka ee PFA, Xilli cayaareed fiican ayuuna ku jiraa marka loo eego wax-qabadkiisa shakhsi ahaaneed.Shabakaddan caayaraha ee Laacibiin.com ayaa ku xasuusineyso in Ozil uu yahay xiddiga ugu caawinta badan England.
” Shaqo wanaagsan ayuu qabtay, waxaa uuna abuuray fursado badan haddana waxaa uu caawiyay goolal muhiim u wada ahaa Gunners. Inkastoo lagu soo daray musharaxiinta haddana masaafo fog ayuu u jiraa ku guulleysiga abaal-marintan”.
Maxaa ka jira inuu baxayo Ozil?
:kkk , Waa hadal suuqeed ee waa uu joogayaa, mana socdo”.
XAALADDA JACK WILSHARER
“Ma aqaan xilliga uu ku soo laaban doono garoomada,- Isniinta ayuu mar kale la dheeli doonaa kooxda yar yar,kadib ayaan qiimeyn doonaa xaaladdiisa,- haddii uu diyaar noqdo, kadib kullanka xiga ayuu safan doonaa”.
Marka laga soo teggo, Wilshere iyo Rosicky, ma jiraan cayaaryahano kale oo ay Arsenal waayi doonto kullanka Crystal Palace.WENGER OO KA HADLAYA KULLANKA PALACE
” Waa London derby, waana koox fiican Crystal Palace,waxay heysataa cayaartoy halis ah oo aan ka baqayo sida, Zaha, Bolasie, Wickham iyo Adebayor.Haddii aan guul dooneyno waa in aysan nagu dhicin sidii aan arragnay cayaartii West ham”
Maxaad Ospina ugu dooratay kullankii West Ham. Miyaadse ibuucan soo cellin doontaa Petr Cech?” Weli ma go’aansanin shabaq-ilaaliyaha aan u dooran doono kullanka Palace,- sida xaqiiqada ah Cech ayaa leh booska kowaad,laakiin haddana ha iloobin in Ospina uu yahay xariif bad-baadin badan.Shaxda 1-aad ayuu ku soo laaban doono Petr”.